စိတ်ဓါတ်ခွန်အား လူ့စွမ်းအား - News @ M-Media
in နှလုံးသားအာဟာရ — January 7, 2015
ဒီဇင်ဘာ ၇ ၊ ၂၀၁၅
ဘ၀မှာ အဖြစ်ချင်ဆုံးက ဘာလဲ?.. လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက် ဆိုတာ ထားရှိသင့်တယ်…ရည်မှန်းချက်ရှိပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ့အတိုင်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်။
လောကထဲက လူတိုင်းလူတိုင်း မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်ရမယ်… ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကဘာလဲ?.. .ရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်…ရောက်ပြီ ဆို ရင်လည်း အဲဒီ့ နေရာလေးကို ပိုမိုမြင့်တက်အောင်နဲ့ တည်မြဲနေဖို့ ကိုယ်က တန်ဖိုးထားပြီး ထိန်းသိမ်းရမယ်…
ကိုယ်ထားလိုက်တဲ့ ရည်မှန်းချက် ကတော့ စိတ်ကူးယဉ်မှုသက်သက် ဖြစ်မနေရဘူးနော်…
အားမလျှော့နဲ့… လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးနဲ့… ကိုယ်ရဲ့ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်မှာ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုအတွက် အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်တွေ ဝေေ၀ဆာဆာ ရှိနေလိမ့်မယ်…..
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာမှတော့ ဆင်းရဲတဲ့ သူဘဲဖြစ်ဖြစ်… ချမ်းသာတဲ့သူဘဲဖြစ်ဖြစ်…အဓိက ထိန်းသိမ်းရမှာက …ကိုယ်ကျင့်တရား ကိုယ်ဘယ်အခြေအနေဘဲ…ရောက်နေပါစေ…
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အတ္တဆိုတာရှိတယ်… .ဒါပေမယ့်ထားသင့်တဲ့အတ္တဖြစ်ရမယ်…အတ္တက အလွန်အကျွံ မဖြစ်ရဘူး…ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တဟာ သူုတပါး အတွက် ဒုက္ခ မဖြစ်စေနဲ့… သူတပါးကို မထိခိုက်သရွေ့ ကိုယ့်အတ္တက ဖြူစင်နေမှာဘဲ….အတ္တရှိမှလည်း ..ဘယ်အရာမဆို..တိုးတက်မှာ… ကိုယ်ထားရမယ့် အတ္တကတော့ ဖြူစင်ဖို့လိုတယ်နော်… အတ္တကြောင့်.. ကိုယ်ကျင့် တရားမပျက်စေနဲ့……
လုပ်ရမှာပေါ့…. လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ရှိ၇မယ်.. ဒါမှ လူ့တန်ဖိုးမြင့်တက်လာမှာပေါ့… အလုပ်ရှိတဲ့ သူနဲ့အလုပ်မရှိတဲ့သူ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်စမ်း….။
(၅) လူ့ချဉ်ဖက်ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာလူ့ယဉ်ကျေးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာသွားလိမ့်မယ်..။
နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေက အများကြီးပေါ့ကွာ…။
အခက်အခဲဆိုတာ လူတိုင်းကြုံကြတာဘဲလေ..။ အဲဒီလိုကြုံလာခဲ့ရင် အရေးကြီးဆုံးက စိတ်ဓါတ်ကိုပြုတ်မကျစေနဲ့..။ ကိုယ်ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ဘေးထွက်ပြီးပြန်စဉ်းစား..။ကိုယ့်အခက်အခဲကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နေရာမှာသူများကိုအစားထိုး…ကိုယ်ကဘေးကနေပြီး အခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်..။ အရှင်းဆုံးပုံစံ ၊အရှင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့ဆုံးဖြတ်ရင် ကိုယ်မမှားဘူးဆိုတာ သေချာတယ်..။ အဓိက က ဘာပြသနာနဲ့ဘဲ ကြုံကြုံ စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထား.´´စိတ်ဓါတ်ကိုမြှင့်တင် ´´လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးရှိမယ်လို့ သိထားသင့်တယ်… ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က တပါးသူကိုမထိခိုက်စေနဲ့ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကို ကိုယ်မထိခိုက်စေရဘူး…။
သူများက ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းခဲ့တာကိုဖြစ်နိုင်ရင်လစ်လျူရှု့ထား..။ ကိုယ်တွေးပြီး ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ရမှာက..ကိုယ်က သူများအပေါ်အစဉ်ကောင်းနေဖို့ဘဲ..။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကကောင်းပေးနေပါရဲ့နဲ့ သူများက ကိုယ်အပေါ် ဆန်ကျင်ဘက် တုံပြန်ရင်လည်း ၀မ်းနည်းနေဖို့မလိုဘူး…။ အချိန်နဲ့အမှန်တရားက စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဘက်မှာ အများကြီး(လုံးဝ ) ရှိနေတယ်..။ ကိုယ်မျက်ရည်တွေကို မဟုတ်တဲ့လူတွေ အတွက် မကျစေနဲကွာ..။ “လစ်လျူရှု့ လိုက်ပါ။ သင်ကောင်းလျှင်ကျွှန်ုပ်မဆိုးပါဆိုတာထက်….သင်မကောင်းလျှင်တောင်…ကျွှန်ပ်မဆိုးပါဆို